सिन्डिकेट विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई शुभकामना
सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन परमादेश जारी गरेसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले त्यसका विरुद्ध कडा तरिकाले प्रस्तुत भयो । गतकालमा झुकाइए झैँ यस पटक पनि सरकारलाई झुकाउने मनसायका साथ यातायात व्यवसायीहरू वैशाख २१ गते आम हडतालमा उत्रिएका थिए । तर सरकार कडा तरिकाले प्रस्तुत भएपछि यातायात व्यवसायीहरू झुक्न बाध्य भएका छन् । यस प्रकार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारले प्राथमिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सफलताका पछाडि सरकार मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता र त्यसमाथि परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको पनि त्यत्तिकै हात छ भन्ने तथ्यलाई यहाँ बिर्सनु सही हुने छैन ।
जे होस्, यातायातको क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारलाई सफलता मिलेको छ । तर यो प्रारम्भिक र प्राथमिक प्रकारको सफलता मात्र हो । सिन्डिकेटका विरुद्ध यस खालको सफलताबाट जनताले कस्तो सकारात्मक अनुभूति कहिलेदेखि पाउनेछन् ? सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकार आगामी दिनमा कति दृढताका साथ उभिने छ ? यी प्रश्नहरूको जन पक्षीय उत्तरका लागि सरकारका आगामी कदम त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारले अहिले प्राप्त गरेको सफलताको अर्थ निजी स्वामित्वको स्थानमा राज्यको स्वामित्व कायम भइसकेको अवस्था होइन । अहिले कम्पनीमा दर्ता हुनुका बाबजुद यातायात क्षेत्रका सञ्चालकहरू मुनाफा कमाउनकै लागि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हुन्, जबकि यातायात क्षेत्र वस्तु उत्पादन प्रधान वा नाफा प्रधान होइन, सेवा प्रधान क्षेत्र हो । त्यसका बाबजुद यस्तो क्षेत्रमा मुनाफाका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनु स्वाभाविक हुँदैनथ्यो । सेवाभावको मनसायका साथ यस क्षेत्रमा राज्यको स्वामित्व कायम हुनु पर्दथ्यो । तर तत्कालका लागि यस्तो अपेक्षा गर्नु शायद काल्पनिक प्रयास हुने छ । यतिखेर हामी निजी स्वामित्वभित्र पनि न्यूनतम थितिको अपेक्षा गर्न सक्छौँ । सरकारले यस दिशामा सराहनीय कदम चालेको छ र प्राथमिक सफलता पनि प्राप्त गरेको छ ।
यतिखेर हाम्रो देशको यातायात क्षेत्रमा राज्यको स्वामित्व छैन । कुनै समयमा साझा यातायात थियो देशमा । राजधानीमा ट्रली बस पनि थियो । रेलसेवा अहिले पनि विद्यमान हुनुका छ । तर त्यसले जनताको नगण्य हिस्सालाई मात्र सेवा पुर्‍याई रहेको स्थिति छ । जबसम्म राज्यको आफ्नै स्वामित्वमा यातायात सेवा हुने छैन, तबसम्म यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछैन । यातायात समितिको विकल्पमा सिधै कम्पनीमा दर्ता हुने वर्तमान प्रावधानले तत्कालका लागि सिन्डिकेटको विरुद्धमा प्रहार भए पनि त्यो सफलता मात्र अन्तिम विकल्प हुने छैन । यदि यातायात क्षेत्रमा केही ठुला पूँजीपतिहरूले कम्पनीमै दर्ता गरेर हजारौँ बस सञ्चालन गर्ने गरी स्वामित्व कायम गर्न सके भने स्थिति के हुन्छ ? वा अहिलेका सबै यातायात व्यवसायीहरू मिलेर सरकार विरुद्ध उत्रिए भने स्थिति के हुन्छ ? यसरी प्रष्ट छ, यातायात जस्तो सेवा प्रधान क्षेत्रमा सरकारको आफ्नै स्वामित्व कायम नहुँदासम्म सिन्डिकेट समाप्त भयो भनेर हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ । वाम पक्षीय सरकारले आगामी दिनमा यस विषयमा योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र छैन । फेरि पनि सरकारले यस क्षेत्रबाट सिन्डिकेटको विरुद्ध स्वागतयोग्य अभियान थालेको छ । यसले सिन्डिकेटयुक्त अन्य क्षेत्रहरूमा निरन्तरता पाउनु पर्दछ । हामी स्वाभाविक ढङ्गले आशा गरौँ– स्वयं सरकार इतरका राजनीतिक दलहरूमा सिन्डिकेटजन्य प्रवृत्ति कायम हुने छैन । धेरै महिना भएको छैन, डा. गोविन्द केसीले मेडिकल क्षेत्रको बेथिति समाप्त गर्न अनसन बसेका थिए, यद्यपि डा. केसी आन्दोलनको विषय ठिक त्य ही प्रकारको होइन । त्यसका बाबजुद स्वास्थ्य जस्तो अर्को सेवा प्रधान क्षेत्रमा पनि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जस्तै बेथिति कायम भएको छ । जब जब डा. केसी मेडिकल क्षेत्रको बेथितिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, अहिलेका सत्तारूढ दलका कैयौँ नेताहरू समेत त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् । त्यो इतिहास बहालवाला वाम पक्षीय सरकारको कार्यकालमा नदोहोरियोस् । यातायात सहित अन्य सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट र त्यस्तै प्रकारको बेथितिका विरुद्ध वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक उभियोस् । हामी वर्तमान वाम पक्षीय सरकारलाई यस्तै खालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।